Ungayitshintsha njani iMvelaphi yakho ye-Twitter
Ungawutshintsha umva wephepha lakho lephrofayili ye-Twitter ukusuka kwibala eliluhlaza ukuya kolunye umbala. Unokufaka umfanekiso owukhethileyo (okanye uzenze zombini!). Unokwenza umfanekiso (uwenze uphinde, njengethayile phantsi), wenze umfanekiso omkhulu ngokwaneleyo ukugubungela yonke imvelaphi, okanye ukhethe umfanekiso omncinci ongagubungeli yonke imvelaphi (kwaye ushiye umbala oqinileyo ngasemva kwawo) .
ithatha ixesha elingakanani ukusebenza i-acyclovir
Ukutshintsha imvelaphi yakho usebenzisa izixhobo ze-Twitter, landela la manyathelo:
Sayina ungene kwi Twitter , Cofa utolo olwehlayo ecaleni kwegama lomsebenzisi, kwaye ukhethe useto.
Iphepha leSeto liyavula.
Cofa kwiTebhu yoYilo.
Khetha umfanekiso ongasemva.
Imvelaphi ye-Twitter eyenziwe kwangaphambili ibonakala kwimifanekiso yesikwere esikwisikwere ngaphakathi kwithebhu yoyilo. Qaphela ukuba ukucofa enye yezi kungatshintshi imvelaphi kuphela kodwa nombala wamacandelo ahlukeneyo kunye nokubhaliweyo kwephepha. Ukuba ukhetha enye yemixholo ye-Twitter, usenokutshintsha eminye imibala kangangoko ufuna.
Ukuba ukhetha ukusebenzisa umfanekiso ongasemva okanye iphethini kwikhompyuter yakho, cofa indawo yokutshintsha imvelaphi yekhonkco engezantsi kwemifanekiso yeepateni. Emva koko, layisha ifayile ngokuchofoza iqhosha lokuKhangela kunye nokufumana umfanekiso wakho kwikhompyuter yakho.
Ukuba ufuna umfanekiso wakho uthayile, cofa ukhetho lweTile yangasemva.
I-osteo bi-flex impilo edibeneyo
Xa wonwabile yimvelaphi, cofa Gcina.
Ukuba usebenzisa i-Twitter ngeenjongo zeshishini, sebenzisa imvelaphi yakho ukubonisa ubunikazi benkampani yakho-uthayipha ilogo yakho njengemvelaphi, umzekelo.
Ukuba ukwenza umfanekiso wakho wangasemva kwiprofayile yakho ye-Twitter kwasekuqaleni ayisiyijubane lakho, ungakhathazeki! Iindawo ezininzi zivelisa iitemplate zasimahla ze-Twitter eziyilelwe kuphela abasebenzisi be-Twitter kwimeko yakho. TwitBacks ikunika ifom yokugcwalisa izithuba ukwenza imvelaphi yakho ye-Twitter.
Ulawulo lwenethiwekhi: iiseva zeVPN kunye nabaXhasi
Iminyhadala ye-Skiing yeLizwe eliNqamlezileyo kwiiOlimpiki zasebusika
Uyisebenza njani indlela yakho kuLuhlu lokulinda lweSikolo sezoNyango
I-188 (iBupropion Hydrochloride eyandisiweyo-yokuKhutshwa (XL) 150 mg)
11 Iingcwele zamaKatolika ezidumileyo
Zibizwa Njani iikhompawundi zeIonic
Ungazisebenzisa njani iiNkqubo eziManyeneyo kwiNkqubo ye-C
Ulwelo lwePotassium Hydroxide
Ukwabelana njani ngeeTown Spotify tracks kwi-Android
Ihlala ixesha elingakanani i-norcos
I-keppra idosi iphezulu kakhulu
yiya kumfumani wepilisi
uyifaka njani i-progesterone capsule
indlela yokuvula ulawulo lwe disk
igama eliqhelekileyo le-acetaminophen
Iipilisi ze-morphine 100 mg